ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လေးဖြူ - အဖေ
လေးဖြူ - အဖေ
အာဇာနည်နေ. ဥသြ ပေးမဆွဲတာ ဟာ နောက်ကွယ်မှာ
ရှုပ်ထွေး တဲ.အကြောင်းအချက်တွေ အများကြီးပါ ၊
.. ပြည်သူတွေရဲ.ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို
စစ်အာဏာရှင် တို.ရဲ.ဖခင် ဗိုလ်သန်းရွှေ က ပုခုံး ချင်း
တိုင်း တာကပြသနာပါ ။
အခုထိပ်ပိုင်းက လူတွေက ကြိုးဆွဲရာ က နေကြရတာပါ ။
Ko Lay Phyu, could you pls. bringaspecial song for our Farther General Aung San
ဟုတ်ပါတယ် မနက်စောစော ၁
နာရီလောက်ကတည်းက ဝင်ပြီးအလေးပြုဘို့ပေးသင့်တာပါ၊ ဟတ်..ဟတ်..